Dị ka ndị na-ere ahịa B2B, anyị niile maara na ịnwe usoro nyocha iji chọpụta ndị ahịa dị njikere ma ọ bụ ndị nwere ike ịzụta ihe dị oke mkpa iji na-agba ọsọ mmemme ọgbọ na-aga nke ọma yana iji jigide usoro ahịa na ahịa. Mana itinye usoro ihe nchịkwa na-arụ ọrụ n'ezie dị mfe ikwu karịa eme. Iji Mintigo, ị nwere ike ugbu a ịnwe ụdị akara ndị na - enyere ike nyocha na amụma amụma na nnukwu data iji nyere gị aka ịchọta ndị na - azụ gị ngwa ngwa. Ọ dịghị nkọ.
Fraịdee, Nọvemba 8, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya nke ụlọ ọrụ, Kapost na-enye ikpo okwu nke na-enyere ndị otu gị aka imekọ ihe na ịmịpụta ọdịnaya, arụmọrụ na nkesa ọdịnaya ahụ, yana nyocha nke oriri nke ọdịnaya ahụ. Maka ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu, Kapost na-enye aka n'inye usoro nyocha na ndozi ọdịnaya na nnabata ọdịnaya. Nke a bụ nkọwa: Kapost na-achịkwa usoro ọ bụla nke usoro na otu ikpo okwu: Atụmatụ - Kapost na-enye usoro mmadụ ebe ị na-akọwa ọkwa ọ bụla na
Dika onu ogugu ihe omuma data na-aga n’ihu na-eto, usoro ọgụgụ isi azụmahịa (BI) na-arị elu (ọzọ). Usoro ọgụgụ isi azụmaahịa na-enye gị ohere ịzụlite mkpesa na dashboard na data n'ofe ebe ị jikọrọ. BIME bụ sọftụwia dịka Ọrụ (SaaS) azụmaahịa azụmaahịa nke na-enye gị ohere ijikọ ma na ntanetị ma ụwa dị n'otu ebe. Mepụta njikọ na isi data gị niile, mepụta ma mepụta ajụjụ
Wenezdee, Machị 11, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Na ọrụ m ga-eme webinar n'izu a. Isiokwu ahụ dịrịla n’uche m ogologo oge tupu arụ ọrụ maka Compendium Blogware. N'oge mbido ọrụ ahịa data m, enyere m aka ịmepụta ma mepụta ngwanrọ nke ga - enyere ndị na - ere ahịa aka ịkọwapụta ndị ahịa ha. Ngbanwe oge anaghị agbanwe agbanwe, n'ihi na oge ụfọdụ ọ bụ maka ntụgharị, ugboro na uru ego. Dabere na ndị ahịa na-azụ akụkọ ihe mere eme, ị nwere ike imetụta omume ha